"Negativity များတဲ့သူတွေ နဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ" • Brand You Academy
“Negativity များတဲ့သူတွေ နဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ”
Brand You Academy ရဲ့ Video လေးအောက်မှာ အစ်မတစ်ယောက်က ကွန်မန့်လေးလာရေးပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့က negativity ရှိတဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုမှ ရှောင်လို့ မရပါဘူး.. တွေ့နေကြုံနေရတာပါပဲ တဲ့။ အဲဒီအခါ စိတ်ဓါတ်အတက်အကျတွေ ရှိပေမဲ့လည်း ကိုယ်သွားချင်တဲ့ goal ကို ကြိုးစားပြီး အရောက်သွားရတာပါပဲ။ အားအင်တွေ ယူပြီးနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစားရတာပါပဲ.. လို့ ရေးထားပါတယ်။အလွန်ပဲ မှန်ပါတယ်။ သဘောကျမိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင် အကောင်းမြင်စိတ်ရှိဖို့၊ တွေးတတ်ဖို့ ကြိုးစားလေ့ကျင့်လို့ ရပေမဲ့ ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေ၊ ဥပမာ ကိုယ့်ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်စေ၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်၊ အထက်လူကြီးဖြစ်စေ အလွန် negative ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်လိုမှကို ပြုပြင်ညှိနှိုင်းလို့ မရဘူးဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ အကောင်းမြင်တဲ့ စိတ်ကလေးပါ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲသောကရောက်ရပါတယ်။ အလုပ်ကမှ တော်ပါသေးတယ် မိဘတို့ အိမ်ထောင်ဖက်တို့က အဲလိုသာဆိုရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ အခုလို Stay at Home ကာလမှာ တအိမ်ထဲ အတူနေသူတွေ၊ ချစ်သူတွေ၊ အလုပ်ထဲက လူတွေက စိတ်ပျက်စိတ်ညစ်နေမယ်၊ မကောင်းတာချည်း တွေးနေ၊ ပြောနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဆီကိုလည်း မသိလိုက်ဘဲနဲ့ စိတ်ညစ်ညူးခြင်းတွေ ကူးစက်လာမှာပါ။
“ရွေးချယ်လို့မရတဲ့ အခြေအနေမှာ Negative ဖြစ်တတ်တဲ့သူနဲ့ တူတူရှိရတဲ့အခါ”
သနားပါ။ဘဝကြီးမှာ သူ့ကိုယ်သူ စိတ်ချမ်းသာ အေးချမ်းအောင် မနေတတ်ရှာဘူး လို့တွေးပြီး သနားလိုက်ပါ။ မနေတတ်ရကောင်းလားဆိုပြီး အပြစ်တင်နေတာက မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကြား နင်မှားတယ်၊ ငါမှန်တယ် ပြောနေလို့လည်း မပြီးပါဘူး။ အဲဒီတော့ သူ့ကို ဝေဖန်ပြစ်တင်မနေဘဲ စိတ်ထဲက သနားပေး၊ ဂရုဏာလေး ထားပေးလိုက်ပါ။
2. Don’t bring it into your life.
သူ့ရဲ့ negativity တွေ ကိုယ့်ဆီ မကူးပါစေနဲ့။လူရဲ့ သဘောသဘာဝ ဦးနှောက်က အလိုလိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Positive နဲ့ negative ဆိုရင် negative ကို ပိုစွဲပါတယ်။ Human bias ပါ။ မွေးကတည်းက ပါပြီးသားပါ။ အဲဒါကိုသွားပြီး ပြင်ဖို့က ခဲယဉ်းတာမို့ ကိုယ့်ဆီကို သူ့ရဲ့ negativity တွေ ရောက်မလာအောင်သာ သတိထားရမှာပါ။ သူ့ကို သွားပြောနေစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ထဲကပဲ သူ့ရဲ့ အနုတ်စကားတွေကို ငါ့စိတ်ထဲထိ ဆွဲယူနေမိပြီလား၊ သိမ်းမိနေပြီလား၊ ငါ့စိတ်ကလေးပါ အမှိုက်ဝင်နေပြီလား ဆိုတာကို သတိထားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ သူစိတ်ညစ်တာနဲ့ ငါပါရောပြီး စိတ်ညစ်နေပြီလား။ သူ့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေက ငါ့ကိုပါ လွှမ်းမိုးနေပြီလား ဆိုတာလေး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးကြည့်ပါ။
သူ့ရဲ့ ကောင်းတဲ့ အရာတွေကို focus ထားပါ။ ချီးမွမ်းပေးပါ။တခါတလေမှာ ကိုယ်တိုင်က သူ့ရဲ့ ကောင်းတဲ့အရာတွေကို မမြင်ဘဲ မကောင်းတာတွေပဲ ကွက်မြင်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မမှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်တွေ အကုန်သိမ်းကြုံးလုပ်တယ်၊ အလွန်စေတနာကောင်း၊ အနစ်နာခံတယ်။ ပါးစပ်ကတော့ အလွန်ကြမ်းပါတယ်။ အပြစ်တင်တတ်တာလည်း အလွန်ပါပဲ။ သူ့နားမှာ ဘယ်သူမှ မနေနိုင်အောင်ကို ဆိုးပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ သူ့ရဲ့ ကောင်းကွက်ကလေးတွေကိုချည်း ကွက်မြင်တတ်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်။ တော်တော်တော့ ခက်ပါတယ်။ သူတခုခု စေတနာပါပါလုပ်ပေးတာလေးမြင်ရင် ချီးကျူးပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူပြောင်းလာဖို့ကိုတော့ အာမ မခံပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်တော့ စိတ်ချမ်းသာနေတာ အမှန်ပါပဲ။
4. Don’t forget your Goals.
ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပန်းတိုင်တွေကို မမေ့ပါနဲ့။ကားလမ်းကြောင်းလုရင်း ရန်ဖြစ်ပြီး နှောင့်နှေးတာတို့၊ အိမ်ကနေ ထွက်ခါနီး တခုခုကြောင့် စိတ်ဆိုးပြီး တနေကုန် အဆင်မပြေဖြစ်တာတို့ ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်လာတဲ့အခါ တခါတလေ ကိုယ့်ရဲ့ အဓိကကဘာ၊ သာမညက ဘာဆိုတာ ရုတ်တရက် မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ အလုပ်သွားဖို့ လှလှပပဝတ်ပြီး စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်လေးနဲ့ အပြင်ထွက်လာတယ်။ အမေက လှမ်းပြီး နင်ပြင်ထားတာကြီးက ဘယ်လို၊ နင့်အကျင်္ီကြီးက ဘယ်ညာဆိုရင် စိတ်တွေမှာ ညစ်ညူးသွားရော။ ဒီကြားထဲ ဘတ်စကားက မလာ၊ လာတော့လည်း ကြပ်ပိတ်သိတ်၊ ကားထဲကလူတွေရဲ့ မျက်နှာကလည်း စိတ်ပျက်၊ စိတ်ဆင်းရဲ နေတဲ့ မျက်နှာဆိုရင် စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့။ အကောင်းမြင်စိတ်မပြောနဲ့၊ အော်ငိုပစ်ချင်စိတ်မပေါက်ရင် ကံကောင်းလို့တောင် ​ပြောလို့ရပါတယ်။အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ပန်းတိုင်က ဘာလဲ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့၊ ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာက ဘာလဲ ဆိုတာမျက်ခြေမပြတ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သည်းခံစရာရှိ သည်းခံ၊ ဥပေက္ခာပြုသင့်တာပြုပြီး လုပ်စရာရှိတာ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းလုပ်တဲ့ အလေ့အကျင့်လေးကို ရအောင်မွေးစေချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ပြီးစီးတဲ့ အလုပ်တွေကို ချ​ရေးပါ။Journaling သည် ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် ကောင်းအောင် တည်ဆောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အမြန်ဆုံး အကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ​ညစဉ်ညတိုင်း ကိုယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့၊ ပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကို ချရေးပါ။ အကြီးကြီးတွေ ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ရေးချလိုက်တဲ့အခါ ငါ့ရဲ့ တနေ့တာဟာ အလဟဿကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ အလုပ်တွေ ပြီးပါလား လို့ တွေးမိသလို နောက်နေ့မှာ ဘာတွေ လုပ်ဖို့ ကျန်သေးတယ်ဆိုတာကိုပါ စဉ်းစားမိစေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တွေ၊ ဆန္ဒတွေကို ချရေးတာဟာဆိုရင်လည်း တကယ်ကို ကောင်းတဲ့ အလေ့အထပါ။ ဒီနှစ်ခုကိုသာ လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘေးကလူက ဘယ်လောက်ထိ အနုတ်စကား၊ အပျက်စကားတွေ ပြောနေနေ ကိုယ်က ကိုယ့်ရဲ့ achievement အလုပ်ပြီးမြောက်မှုနဲ့ အိပ်မက်တွေအတွက် ကြိတ်ပျော်နေမှာပါ။
6. Don’t try to change everybody.
လူတိုင်းကို ပြုပြင်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။Coach တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာလဲလို့ တွေးကြပါလိမ့်မယ်။ Coach အချင်းချင်း စကားပြောကြတဲ့အခါ ဒီလူကတော့ Coachable ဖြစ်တယ်၊ ဒီလူက coachable မဖြစ်ဘူး ဆိုတဲ့ စကားကို ခဏခဏသုံးကြပါတယ်။ Coachable ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က လူတစ်ယောက်သည် မာနကို ချပြီး ဖွင့်ထားတဲ့ စိတ်နှလုံးနဲ့ လက်ခံသင်ယူနိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ကိုယ်သာလျှင် အတော်ဆုံးလို့ ထင်နေပြီး Open မဖြစ်တဲ့သူကို ကမ္ဘာမှာ အတော်ဆုံး coach က လာသင်ပေးလည်း မအောင်မြင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဘေးကလူတွေကို တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းမြင်စိတ်ရှိအောင် လုပ်ရမှာ၊ မျှဝေပေးရမှာ၊ ဆွဲခေါ်ရမှာမှန်ပေမဲ့မာရသွန်ပြေးလမ်းပေါ်မှာ လှဲအိပ်နေတဲ့သူကို ဘယ်လိုလုပ် ပန်းတိုင်ရောက်အောင် ဆွဲမလဲ။ သူ့ကိုဆွဲခေါ်တဲ့သူတောင်မှ ပန်းမဝင်ရဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးဆက်ဆံပေး၊ ပြုပြင်ပေးလို့ မရရင် သူ့ဖာသာသူ ပြင်လာဖို့ အချိန်ကို စောင့်ဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ပြေးစရာရှိတာ ပြေးရမှာပါပဲ။
7. Pay attention to Social Media.
Social Media ပေါ်က အနုတ်စကားတွေဒီနေ့ခေတ်မှာ ကံကောင်းတာလား ကံဆိုးတာလားမသိ လူတိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့ အထင်တွေ၊ အမြင်တွေ၊ အတွေး၊ စိတ်သောကတွေကို ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင့် ဘွင်းဘွင်းကြီး အဆီးအတားမရှိ ပြောလို့ဆိုလို့ ရနေကြပါတယ်။ မနက်မိုးလင်း Facebook ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဘယ်နယောက်တွေ့ပြန်ပြီ။ ဘယ်လိုဖြစ်ပြန်ပြီ။ ဘယ်တိုက် ဘယ်ရပ်ကွက်က lock down ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ အနည်းနဲ့အများ ကိုယ်သာဆိုရင်၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေသာဆိုရင် ဆိုတဲ့ အတွေးက ရှိတာပါပဲ။ ကြောက်စိတ်ဝင်တာပါပဲ။ လူ့သဘာဝကိုး။ ဒါဖြင့် လုံးဝမသုံးပါနဲ့လားဆိုတော့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အလုပ်တွေ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေ၊ communication တော်တော်များများက ဒီမှာ ဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီတော့ သတိထားပြီး သုံးဖို့ရာသာ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ပြောကြဆိုကြ၊ ဆူကြဆဲကြ၊ မြင်နေရတာတွေသည် အားလုံးမမှန်ဘူး၊ အကုန်မဟုတ်ဘူး၊ ငါလုပ်စရာရှိတာတွေက ဘာ၊ အပြင်လောကမှာ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ စားဝတ်နေရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး အဲဒါလေးတွေကိုပါ မျှတအောင် ကြိုးစားပြိးနေရင် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က negativity ကိုယ့်ဆီ ကူးလာတာ နည်းမှာပါ။ ကိုယ်တိုင်က မသိလိုက်ပဲနဲ့ ဖြန်ဝေသူ မဖြစ်ဖို့ကတော့ အရေးကြီးလှပါတယ်။
PrevPrevious“လုပ်ငန်းခွင်က လူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ Career Branding တည်ဆောက်ခြင်းနည်းလမ်း ၅ သွယ်”
Next“စိတ်ညစ်နေရင် ဒီ ၃ ခု လုပ်ပါ”Next